कसरी तय भयो ‘वर्षा-सन्जोग’ को विवाहसम्मको यात्रा ? – Mero Film
कसरी तय भयो ‘वर्षा-सन्जोग’ को विवाहसम्मको यात्रा ?
- दिक्षा कट्टेल / मेरो फिल्म
१४ फेब्रुअरी अर्थात भ्यालेन्टाइन डे र नेपाली फिल्मका दर्शकहरुको लागि महत्वपुर्ण दिन वर्षा-सन्जोगको विवाह । लामो समय सम्मको प्रेम पश्चात कलाकार बर्षा राउत र कलाकार तथा युवा व्यवसायी सन्जोग कोइरालाले सम्बन्धको नाम दिने भएका छन् । विवाहको उदघोस केही समय अघि गरेका यी दुइले फेब्रुअरी ११ अर्थात प्रमिस डेको दिन जीवन भरसंगै रहने बाचा सहित इन्गेजमेन्ट गरेका छन् ।
करिव ६ बर्ष अगाडी फिल्म ‘सरी ल’को अडिसनको लागि वर्षा र सन्जोग पुगेका थिए । हिरो कुरिरहेको बेला आर वान फाइभमा आएको पुड्के केटालाई देखेर ‘यस्तो पनि हिरो हुन्छ ?’ भन्ने भएको थियो बर्षालाई । तर राम्रो भने लागेको थियो । त्यस पछी फिल्मको लागि सेलेक्ट भयो भनेर फिल्म निर्देशक ऋषि लामिछानेले भनेपछि सामाजिक संजालमा जोडिएर कुरा हुन थाल्यो ।
लामो समय सम्मको मित्रता
कुनै समय पनि सिरियस हुन नचाहने वर्षालाई देख्दा सन्जोगलाई कस्तो ‘इरिटेटिंग रहिछ’ भन्ने लागेको थियो । लामो समयसम्म साथी नै भएर रहेका यी दुई बीच प्रस्ताव नगरी नै माया बसिसकेको थियो । त्यसैले पनि भन्न सक्दैनन् कहिले कुन दिन माया बस्यो ।
दोलखा जाने बेलामा झगडा गरेर ब्रेक लिन्छु भनेर सन्जोग गएको कुरालाई वर्षा एक मात्र ब्रेकअपको रुपमा लिन्छिन् । तर अहिले सम्झिदा उनलाई त्यो त घुम्न जाने बहाना रहेछ भन्ने लाग्छ ।
करियर भन्दा सम्बन्धमा बिस्वास
आफ्नो सम्बन्ध मजबुत भएको कारण बरु करियरमा समस्या आउला तर सम्बन्धमा समस्या नआउने भन्छिन् वर्षा । करियरका लागि आफ्नो इफोर्ट लाग्ने भए पनि सबन्ध सन्जोगकै कारण अघि बढ्ने उनको बिवास छ । संजोगको एक मात्र डर बर्षालाई गुमाउने भएकै कारण पनि सम्बन्ध टुक्रिने सम्भावना छैन ।
प्रमिस डेमा इन्गेजमेन्ट
फेब्रुअरी ११ अर्थात भ्यालेन्टाइन विकको कसम खाने दिन नै ‘सन्सा’ जोडी बनेका छन् बर्षा सन्जोग । एक अर्काको साथ रहने कसम खादै यो जोडीले औठी साटेको छ ।
प्रणय दिवसमा विवाह
सामाजिक संजालमा बिवाहको निमन्त्रणा कार्ड सार्वजनिक गर्दै आम दर्शक र फ्यानलाई विवाह २०१९को प्रणय दिवशको दिन विवाह गर्ने जानकारी गराएका थिए । र आज त्यहि दिन हो जहाँ मायालु जोडीको सम्बन्धले नाम पाउदै छ ।
प्रणय दिवसको इतिहास
तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर रोमबाट प्रारम्भ भएको ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को इतिहासलाई हेर्दा पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको वलिदानसँग सम्बन्धित छ । तत्कालीन रोमन सम्राट् क्लाउडियस द्वितीयले युवा प्रेम र विवाहतिर लागे सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छ भन्ने ठानेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर भ्यालेन्टान भने सम्राट्को निर्णयलाई धर्मविरुद्ध भन्थे । उनले सम्राटको उर्दीको विपरित लुकिछिपी जोडीहरूलाई बिहे गराइदिन थाले । यो कुरा सम्राटको कानसम्मपुग्यो । भ्यालेन्टाइनलाई पक्राउ गरियो र जेलमा थुनियो । जेलरकी छोरी उनलाई भेट्न जेलमा आइरहन्थिन् । झुण्ड्याइनु अघि उनले “लभ फ्रम युअर भ्यालेन्टाइन” भनि हस्ताक्षर गरी एउटा नोट ती महिलालाई दिए । भ्यालेन्टाइनलाई ई. पू. २७० को फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन झुण्ड्याइयो । उनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउन थालिएको र यस समयमा प्रेमको सन्देश दिने प्रचलन सुरु भएको हो । र बर्षा र सन्जोग सामाजिक र कानुनी रुपमा आजकै दिन एक हुदै छन् ।
एक्टर विथ जिरो हेटर
काम गर्दै जादा सकारात्मक नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया पाइन्छ । तर वर्षा सन्जोग यस्तो जोडी हो जसलाई कसैले पनि नकारात्मक रुपमा लिएको छैन । आशा गरौ वर्षा सन्जोगको यो बैवाहिक जीवन अझ बढी मजबुत बनोस् शुभकामना ।
२०७५ फागुन २ गते ०:०८ मा प्रकाशित
युटुवमा फिल्म हेर्ने दर्शक बढे,४ फिल्म ट्रेन्डिङमा
फिल्मकर्मीको गुनासो : ‘प्राविधिक होटेल खोल्ने , कलाकार खेती गर्ने दिन आयो’
कलाकारहरुको भाइटिका २०७७ सालको यस्तो रह्यो (तस्विर फिचर सहित)
दसैँ–तिहारमा पनि फिल्म हलमा ताल्चा
भुकम्पको झल्को दिने श्रेष्ठको ४२५ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिने
पलले ‘रेड वाइन’छोडेपछि पुष्पको इन्ट्रि
आदित्यको विवाहको तयारी, मोदीलाई विवाहको निम्तो
फिल्म ‘नालापानी’ लाई सहयोग गर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाई
‘तिमि र म’ बोलको गीतमा धुर्ब र रिया
प्रियंकाको विज्ञापन नै हो त ?
राजेशले भिडियोमा पनि निर्देशक जन्माउने हो र अब ?